Azụmaahịa Aka na Google Spreadsheets | Martech Zone
Agara m na Chamber of Commerce dị na mpaghara a na mgbede iji kwurịta mmeghari ndị ọhụrụ. Islọ ahụ bụ nzukọ dị egwu, mana ọ bụ ezigbo ihe atụ nke ọrụ ebe mmegharị bụ ihe obi nke nzukọ ahụ. Ekwenyesiri m ike na ụlọ ahụ nwere ike ịkwụsị ego na ndị na-esonye n'afọ mbụ. Agbanyeghị, mgbe afọ ahụ gachara, uru ha na - abawanye - na uru ọ bara na Chamber Member anaghị ala.
N'abalị taa, mụ na onye ọrụ ibe m kwurịtara okwu, Darrin Agba, na otu anyi nwere ike isi tinye ebe ndi mmadu na-enyere aka imeghari ohuru nwere ike soro ha na ndi otu ohuru ma obu ndi otu nwere ike ịnọ n'ihe egwu. Anyị kwuru okwu site na ịmepụta weebụsaịtị - ihe ga-achọ puku dollar na izu ole na ole iji wuchaa ya. Darrin kpaliri maka ihe ngwọta dị mma ma mechaa kwuo ya…
Voila! Akwụkwọ ozi Google. Otu enyi m, Dale, kesara m mpempe akwụkwọ na izu ole na ole gara aga ma echetara m ya mgbe ọ gwara m ka m lelee ya. O were ruo abalị a, mana m mere na ọ dị mma. Mgbe ị debere mpempe akwụkwọ gị, ị nwere ohere ịkpọ ndị folks ka hazie ma ọ bụ lelee mpempe akwụkwọ.
M tinye aro maka Google maka njikwa mbipute (kwụgidere nitwit nke na-ehichapụ ahịrị niile na mberede), yana ikikere mpempe akwụkwọ. N'okwu a, anyị nwere ike ịmepụta mpempe akwụkwọ maka onye otu na-enyere aka iji soro ndị otu ekenyere ha n'ihe egwu.
Lee ngwá ọrụ dị ukwuu, ọ bụ ezie! Echere m na ọ ga-arụ ọrụ. Mụ na Darrin anọwo na-enyere ụlọ ahụ aka inyocha azụmaahịa ha maka ụfọdụ atụmanya atụmanya nyocha afọ abụọ gara aga. N'afọ gara aga, emepụtara m Z-Score nke dabere na SIC, Afọ na azụmahịa, ọnụọgụ ndị ọrụ, na ọnụ ọgụgụ ahịa niile. Nke a nyere anyị ohere inyocha ma dọpụta 1 / 10th na atụmanya ndị otu ahịa ha ga-akpọtụrụ. Ihe ndị esi na mkpọsa ahụ pụta karịrị ọkara, mana anyị na-agbanwe ihe nlereanya iji melite nsonaazụ afọ a.
Tags: gbamgbamuloụlọ ọrụ azụmahịadarrin isi awọAkwụkwọ ozi GoogleNa-atụ anyatelemarketing